ZEC Inoti Vakuru veHurumende Ngavataurirane Vega
Sachigaro weZimbabwe Electroal Commission, VaSimpson Mutambanengwe, vakurudzira mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, kuti vaite musangano nevamwe vakuru muhurumende, mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, uye mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, nenyaya yavo yekuti muboka reZEC makazara vasori.
VaMutambanengwe vanoti havadi kupinzwa munyaya dzezvematongerwo enyika. MDC inoti kubva muna 2002 pachine Electoral Supervisory Commission sarudzo dzaiitwa dzichitungamirwa nevechiuto. MDC inoti veESL vaiendesa zvose zvavanenge vawana kuna Brigadier Douglas Nyikayaramba vaiva mushandi mukuru musangano iri kana kuti chief electiions officer.
VaTsvangirai vanoti ZEC inoda kuvandudzwa kana ichida kuita sarudzo dzisina mutauro. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPedzisayi Ruhanya, vanoti ichokwadi kuti vasori nemauto vakazara muZEC.